वेस्ट इन्डिजविरुद्ध स्टोक्सले कप्तानी गर्ने- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
वेस्ट इन्डिजविरुद्ध स्टोक्सले कप्तानी गर्ने
असार १७, २०७७ एजेन्सी
लन्डन — बेन स्टोक्सले अर्को साता वेस्ट इन्डिजविरुद्ध हुने पहिलो टेस्टमा इंग्ल्यान्डको कप्तानी गर्ने भएका छन् । नियमित कप्तान जो रुट दोस्रो पटक सन्तानको पिता बन्न लागेकाले पहिलो टेस्ट गुमाउँदा स्टोक्सले नेतृत्व गर्ने मौका पाएका हुन् ।
फाइल फोटो : रोयटर्स
रुटले बुधबार साउथह्याम्पटनमा इंग्ल्यान्डको अभ्यास क्याम्प छाड्नेछन् । उनकी श्रीमतीले यसै साताको अन्त्यमा बच्चालाई जन्म दिने आस गरिएको छ । इंग्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजबीचको पहिलो टेस्ट जुलाई ८ मा सुरु हुँँदै छ । शृंखला बायोसेकुर वातावरणमा भइरहेकाले अस्पतालबाट फर्किएपछि २९ वर्षे रुटले एक साता स्वयं आइसोलेसनमा बिताउनुपर्नेछ ।
बुधबारदेखि नै इंग्ल्यान्डका खेलाडीबीच हुने आन्तरिक अभ्यास खेलमा पनि रुट हुने छैनन् । रुट जुलाई १३ मा इंग्ल्यान्ड टोलीमा समावेश हुनेछन् । दोस्रो टेस्ट ओल्ड ट्राफोर्डमा जुलाई १६ बाट सुरु हुँँदै छ । जोस बटलरलाई हाललाई उपकप्तान बनाइएको छ ।
स्टोक्स इंग्ल्यान्डको ८१ औं टेस्ट कप्तान बन्ने छन् । एन्ड्रयु फ्लिन्टफपछि पहिलो अलराउन्डर पनि । व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा स्टोक्ससँग कप्तानी गरेको कुनै अनुभव छैन । उनले सोमबारमात्र कुराकानीमा आफूले यसअघि डरहम एकेडेमीबाट मात्र कप्तानी गरेको जनाएका थिए ।
रुट सन् २०१७ मा कप्तान बनेपछि स्टोक्सको उपकप्तानका रूपमा यो दोस्रो कार्यकाल हो । २०१७ मा ब्रिस्टल नाइट क्लबबाहिर भएको एक घटनाका लागि उनको उपकप्तानी पद खोसिएको थियो । २०१९ मा उनलाई पुन: रुटको कार्यबाहक बनाइएको थियो र त्यही वर्ष इंग्ल्यान्डले विश्वकप जित्दा उनी इंग्ल्यान्डका सबैभन्दा प्रभावशाली खेलाडी थिए । हेडिङ्लेमा अस्ट्रेलियामाथि १ विकेटको विजय हात पार्दा टेस्ट क्रिकेटकै अविस्मरणीय इनिङ्स खेलेका थिए ।
कप्तान भए पनि आफ्नो खेल्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन नगर्ने उनले जनाउँदै आएका थिए । ‘इंग्ल्यान्डको कप्तानी गर्न पाउन ठूलो सम्मान हो, चाहे त्यो एक पटकका लागि मात्र भए पनि मैले इंग्ल्यान्डको कप्तानी गरेको थिएँ भनेर भन्न पाउने छु,’ स्टोक्सले सोमबार भनेका थिए, ‘इंग्ल्यान्डको कप्तान बन्ने भन्ने सोच्नु पनि ठूलो सम्मान हो । म यसको प्रतीक्षामा छु तर जो रुटले व्यक्तिगत कारण देखाई यो एक खेलका लागि मात्र छाडेको भएकाले म एक टेस्टका लागि मात्र कप्तान हुँ भनेर मलाई थाहा छ ।’
प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०९:३१
प्रेम र शारीरिक सम्बन्ध नितान्त निजी विषय हुन् । विवाह नगरी यी दुवै हासिल गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक बालिग नागरिकलाई छ ।
असार १७, २०७७ शीतल दाहाल
‘अविवाहित महिला संसारकै खुसी’, ‘एक्लो हुनु सृजनात्मक हुनु हो’, ‘अविवाहित हुनु आफ्नो मर्जीको जीवन जिउन पाउनु हो’ शीर्षकका लेख सामाजिक सञ्जालमा जब आइपुग्छन्, तब ती हामीजस्ता ‘सिंगल’ हरूलाई सबैभन्दा पहिला फरवार्ड गरिन्छन् ।
त्यस्ता सामग्री फरवार्ड गर्ने मेरा प्रिय मित्रहरूलाई कटाक्ष गर्नु या प्रत्युत्तर दिनु यो आलेखको उद्देश्य होइन । ती बरु यो लेखका प्रेरक हुन् । ‘सिंगल’ र सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्तसमेत भएकी हुनाले ‘सिंगल’ हुनुका फाइदा र बेफाइदा म आफैंले लेख्दा उपयुक्त ठानेकी हुँ ।
केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा ‘आई निड अ हग’ (मलाई अंकमाल आवश्यक छ) शीर्षकको करिब तीन मिनेट लामो भिडियो भेट्टाएँ र दोहोर्‍याई–तेहर्‍याई हेरें । एउटी युवती/महिलालाई प्रत्येक दिन प्रेमीको अंकमाल जरुरी हुन्छ, पुरुषको प्रेमिल स्पर्शले महिलाको शरीरमा कसरी सकारात्मक ऊर्जा उत्पादन गर्छ, दिनमा कम्तीमा एकपटक अंकमाल गर्दा महिलाको रक्तचाप सन्तुलित रहन कसरी मद्दत गर्छ, अंकमालले महिलामा प्रेमको हर्मोन उत्पादन गर्न र निराश पार्ने टक्सिनहरूलाई कसरी उत्सर्जन गर्न सहयोग गर्छ भन्ने विवरण उक्त भिडियोमा छ । अरू साथी पनि त्यस सुन्दर भिडियोका हकदार हुन् भन्ने ठान्दै मैले त्यो कैयौंलाई तत्काल फरवार्ड गरें । हेर्ने धेरैले त्यसलाई कसरी लिए कुन्नि, तर मजस्तै ‘सिंगल’ एक साथीले उक्त भिडियोले आनन्दको बदला तनाव दिएको बताइन् ।
‘सिंगल’ हरूका बारे हाम्रो समाजको बुझाइ छ— मन लागेको ठाउँ जान पाउने, मन लागेको कुरा गर्न पाउने, पारिवारिक बन्धनबाट मुक्ति मिल्ने, सन्तानप्रतिको चिन्ता नहुने, अर्काको झन्झट बोक्न नपर्ने, आर्थिक व्ययभार कम हुने, पारिवारिक उत्तरदायित्व वहन गर्न नपर्ने । तपाईं पाठकहरूलाई पनि लाग्न सक्छ— ‘सिंगल’ हुनु गजबै फाइदाको कुरा हो । तर आफ्ना समस्या राख्नुअघि हामी ‘सिंगल’ को प्रश्न तपाईं ‘डोयट’ (जोडीवाला) हरूलाई— के लोग्नेको स्वास्नी र स्वास्नीको लोग्ने नहुनेबित्तिकै संसारका सबै नातासम्बन्ध गुमनाम हुन्छन् ? विवाह गरेर सन्तान नजन्माउने व्यक्तिहरू लट्टाईबाट छिनेको चंगाझैं सम्पूर्ण रूपमा मुक्त, असम्बन्धित र गैरजिम्मेवार हुन सक्छन् ? एकल हुनेबित्तिकै सबै सामाजिक, आर्थिक, मानवीय र पारिवारिक उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन मिल्छ ? बिहे नगर्नेहरू पूर्ण रूपमा फुक्काफाल हुन्छन् ? बिहे नगर्नेहरूले अर्काको पीरमर्का बुझ्दैनन् ? बिहे नगर्नेबित्तिकै पारिवारिक जिम्मेवारीबाट भाग्दै निर्जन टापुको संसार सिर्जना गरेर बाँच्न सकिन्छ ? ‘सिंगल’ लाई चाहिँ प्रेम जरुरी हुन्न ?
कतिपय साहित्यकारले भनेका छन्— प्रेमका अनेक अभिव्यक्तिमध्ये यौन सर्वोत्कृष्ट हो । अनि ‘सिंगल’ हरूको सवालमा प्रेम र ‘प्रेमको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति’ को स्थान समाजमा कहाँनिर छ ? यस्तो स्वाभाविक मानवीय/जैविक/भावनात्मक अभिव्यक्तिमा ‘सिंगल’ हरूलाई रुचि लाग्ला कि नलाग्ला ? आमविवाहित जोडीको जस्तै अविवाहितहरूको यौन जिज्ञासा र आवश्यकता कस्तो हुन्छ ? के ‘एक्ले’ हरू जीवनभर हाम्रो समाजले भ्रमपूर्ण तवरले पत्याएको तर विज्ञानले नमानेको ‘भर्जिन’ अवस्थामै रहलान् ? ‘सिंगल’ हरूमा शारीरिक सुखभोगको रहर नहोला ? समाजका लागि ‘सिंगल’ हरू अर्कै ग्रहका प्राणी (एलियन) हुन् । हुन पनि ‘सिंगल’ हरू हाम्रो समाजका अल्पसंख्यक हुन् र समाजलाई ‘सन्की एकल’ हरूका यस्ता उत्ताउला र छाडा सवालमा खास चासो नहुन सक्छ ।
चर्चामा रहेका केही नामलाई मिडिया बेलाबेला सोध्छन्— तपाईंको विचारमा यौन के हो ? सबैजसोको उत्तर हुन्छ– ‘दालभातमा अचारजस्तै । यौनबिनाको जीवन सार्थक हुँदैन ।’ विवाह नामक संस्थामा दर्ता नभई यौनाधिकार नपाइने समाजमा एकलहरूले यौनसुख खोज्नु अपराध हो । किनकि समाजले विवाहबिनाको शारीरिक सम्पर्कलाई वर्जित मात्र गरेको छैन, यौनलाई पापको मुहानसमेत भनेको छ । समाज/परिवारको स्वीकृति, विवाह विधि जस्ता प्रक्रिया पूरा नगरेका विपरीतलिङ्गीले कोठाभित्र समय बिताउनु अति आपत्तिजनक कृत्य हो ।
कथङ्कदाचित् त्यस्तो अवस्थामा राज्यको प्रहरीले भेट्टायो भने अपमान र पक्राउ गरिने मात्र होइन, भोलिपल्ट मिडियामा ‘आपत्तिजनक अवस्थामा रंगेहात पक्रिएको’ भन्दै तपाईंको तस्बिर र नाम छापिने सम्भावना हुन्छ । अर्थात्, ‘सिंगल’ हरू शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक रूपमा जतिसुकै परिपक्व भए पनि अर्को योग्य वयस्कसँग स्वैच्छिक सम्बन्ध राख्न मिल्दैन । एक अविवाहित (अझ त्यसमा पनि महिला) ले यौनजस्ता ‘छाडा विषय’ मा बहस गर्न खोजे तल्लो स्तरका टिप्पण्कीो सामना गर्न तयार रहनुपर्छ । त्यो छोटो भिडियोबारे लामो छलफलपछि हामी दुई मित्रको निष्कर्ष रह्यो— न्यानो अंकमालका भोका संसारका सबै उमेर र वर्गका सबैजसो प्राणी छन् । त्यस अंकमालको जरुरी हामी ‘सिंगल’ लाई त्यति नै छ, जति आम जोडीलाई छ । प्रणय साथीको प्रेमिल स्पर्शले शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा र प्रेमिल हर्मोन उत्पादन गर्छ, निराश पार्ने टक्सिन फाल्छ भन्ने थाहा पाउँदा कसलाई खुसी नलाग्ला ? तीव्र व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र असन्तुष्टिको यो युगमा आफ्नो प्रियतमको न्यानो अँगालोमा चैनको सास फेर्न कसलाई मन नलाग्ला ? तर वैवाहिक प्रमाणपत्र नभएकै कारण यति सुखद अनुभूतिबाट एकल वयस्कहरूलाई वञ्चित गर्ने सामाजिक सोच भर्त्सनायोग्य छ, भत्काउनयोग्य छ ।
प्रेम र शारीरिक सम्बन्ध नितान्त निजी विषय हुन् । विवाह नगरी यी दुवै हासिल गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक बालिग नागरिकलाई छ । यस्तो स्वतन्त्रताको माग गर्नेबित्तिकै हामीलाई ‘बिहे नगरीकनै ?’ भन्दै एक हात लामो जिब्रो फड्कार्दै ‘समाज भँडुवा’ को संज्ञा दिइन्छ । विवाहपश्चात् श्रीमान्को मृत्यु भएका, कुनै कारण सम्बन्धविच्छेद भएका या कुनै दीर्घरोगले थलिएका पुरुषका श्रीमतीको प्रेम र यौनाधिकारको अवस्था त झन् कति कहालीलाग्दो होला ! महिलाले एकपटक जग्गे घुमेर लोग्ने वरण गरेपछि आफ्नो शरीर र शरीरसँग जोडिएका सबै चाहना ‘अनादिकालसम्म सुम्पिनुपर्ने’ गजबको चलन र मान्यता छ हाम्रो । विधवा नामकरण गरिएकी श्रीमतीको यौनिक आवश्यकता लोग्नेको चितासँगै जलाइन्छ । धर्म र संस्कारको नाउँमा, डर या धम्कीको आडमा समाजले त्यस्ता स्वाभाविक जैविक चाहनालाई नियन्त्रणमा राखेको थाहा पाएर ती महिलाको मनमा कति आगो बल्दो हो !
जड समाजका मक्किएका चलन र सोच कतिलाई महान् त्याग र गौरवशाली परम्परा लाग्दा हुन् । तर तपाईं हामीले आफन्त, छिमेक, घरकै एकल अथवा विधवा महिलालाई एकपटक यो प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरेका छौं— श्रीमान्को मृत्युसँगै तपाईंको शारीरिक चाहना पनि मरेको हो ? यस्ता प्रश्नले स्वाभाविक निचोड निस्कनेछ— पाप–धर्मको त्रास देखाएर, इज्जत–बेइज्जतका कथा बुनेर विधवाहरूको यौन र प्रेम चाहनाको हत्या र हरण गरिएको हो । बुहारीको अकाल मृत्यु हुँदा छोराका लागि नयाँ बुहारी भित्र्याउन ढिलो नगर्ने समाजले अब बुझ्नुपर्छ— छोरा मरेपछि बुहारीहरूलाई पनि अर्को सुयोग्य पात्रको जरुरी हुन्छ, जसबाट बुहारीका शारीरिक र भावनात्मक रहर पूरा होऊन् ।
विधवा र एकलले मात्र आफ्ना यौन–प्रेम चाहना दबाउनुपरेको सत्य होइन । देशका लाखौं युवा विदेशमा छन् । तिनका जवान श्रीमती लोग्ने आउने आशामा छन् । बिहे गरेको तीन महिनामा लोग्ने विदेश जान्छ । विदेश गएको दुई–पाँच वर्षमा केटो ‘लाहुर’ बाट फर्कन्छ वा नफर्कन पनि सक्छ । हाम्रो समाजलाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ता लोग्नेको अनुपस्थितिमा युवतीले अरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ली कि भन्ने हुन्छ ! विदेशमा केटाले के गर्ला भन्ने प्रश्न उल्लेख्य हुँदैन, किनकि, ‘ऊ त छोरो मान्छे !’ पुरुषलाई यौन–प्रेम सहज हुँदा महिलालाई भने त्यस्तो छँदै छैन । यति सार्वभौम कुरामा समेत समाजले स्त्री जातिमाथि खुला विभेद गरेको छ । समाजमा हुन सक्ने विचलनको जिम्मा जहिले पनि महिलाको काँधमा हुने लाग्थ्यो, तर होइन रहेछ, महिलाको योनिमा हुने रहेछ । सिंगो समाज संस्कार जोगाउने नाउँमा महिलाको योनि जोगाउन लागिपरेको सत्य कसैबाट लुकेको छैन । महिलाले कुनै पनि मूल्यमा आफ्नो विवाहित पुरुषबाहेक अर्कोसँग सम्बन्धमा रहन भएन भन्ने मान्यता किन स्थापित भयो भने समाजको नेतृत्व पुरुषले गर्छन् । आफ्नो नेतृत्वमा हुँदा आफ्नो जाति वा पक्षमा हालीमुहाली गराउनु मानवीय स्वभाव हो । महिलाले कोसँग हिँड्ने, उठ्ने या सुत्ने भन्ने फैसला पुलिंगी समाजले गर्छ । समाजको नेतृत्व पुरुषले गर्ने भएकै कारण विधवा महिला, ‘सिंगल’ महिला वा विदेशमा
लोग्ने भएका महिला हरदम पुरुषकै निगरानी र नियन्त्रणमा रहन्छन् । पुरुषहरूको वर्चस्व भएको र पुरुषसंहिता लागू भएको यो समाज महिलाका लागि उकुसमुकुसपूर्ण छ । यसमा महिलाहरूको हालत युद्धबन्धकको जस्तो छ । पुरुष समाजसँग सम्झौता गरेर, हो मा हो मिलाउनेलाई त उकुसमुकुसपूर्ण छ भने, विद्रोही एकलहरूको हालत के होला ? विद्रोहको बेचैनीमा पनि चैनको सास फेरेर आफ्ना इच्छाबेगर जिन्दगी बाँच्ने नाउँमा सम्झौता नगर्ने पराक्रमी ‘सिंगल’ हरूलाई सलाम !
प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०९:२७
जसले वेस्ट इन्डिज क्रिकेटको बलियो जग बसाले
‘बढी मारमा खेल पत्रकारिता’
अनुबन्ध थप्नेबारे मेसी र बार्सिलोनाको छलफल रोकियो
एटलान्टाले नेपोलीलाई २-० ले हरायो
लिभरपुलमाथि सिटीको चार गोल
रियल उपाधितर्फ अग्रसर
अपडेटः शुक्रबार, १९ असार, २०७७ । १६ : ५० बजे